ग्याजेट – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:५० 0
२० हजारदेखि २५ हजारसम्मका फोन खोज्दै हुनुन्छ? भिभोका यी फोन हेर्नुस्
वर्क फ्रम होम : समयसीमा र सर्तहरु
कोरोना महाव्याधीपछि घरमै बसेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यलय आउजाउ गर्दा, कार्यथलोमा काम गर्दा भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने भएपछि संभव भएसम्मको काम घरबाटै गर्न थालिएको छ । यद्यपि इन्टरनेटको सहज पहुँचले वर्क फ्रम होमको अवधारणा निकै…
काठमाडौं । आजको समयमा सेल्फीको क्रेज जो कोहीमा पनि देख्न सकिन्छ । अत्याधुनिक मोबाइल फोनमा रहेका शक्तिशाली क्यामराहरुले मानिसहरुको सेल्फी कल्चरलाई बढावा दिइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको सेल्फीको इतिहासका बारेमा…
थाहा पाउनुहोस ८ देश जहाँ छ विचित्र ड्राइभिंग नियम!
एजेन्सी- नेपालको ट्राफिक तथा ड्राइभिंग नियम एकदमै कमजोर छ । तर नेपालमा सजिलो र कमजोर ड्राइभिङ नियम भए तापनि धेरै मानिसहरू तिनीहरूलाई पालन गर्दैनन् । यधपी संसारमा यस्ता देशहरु पनि छन् जहाँ ट्राफिक तथा ड्राइभिंग नियम विचित्र छ । यिनै हुन्…
यदि तपाईं इन्टरनेट नभएको ठाउँमा यात्रा गरिरहनु भएको छ भने यूट्यूबको तलतलले सताउन सक्छ । यो मात्र होइन, अरु पनि थुप्रै कारण हुन सक्छन्, यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुको । एकपटक यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई चाहेको समयमा अघाउञ्जेल…
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता पक्कै पनि ‘डायल अप’ प्रविधिसँग जानकार हुनुपर्छ। इन्टरनेटमा ब्रोडब्यान्ड प्रविधि भित्रिनुअघि पनि इन्टरनेट प्रयोग गरेको अनुभव छ भने डायल अप प्रविधिसँगका तीतामीठा अनुभव पक्कै छन्। मोडेमबाट किर्ररकिर्रर आवाज निकाल्दै…